Nezvedu - Saka Zvakanaka Fekitori Technology Co.
● Hunhu ndiyo hwaro
● Hupenyu kurudziro
● Kugadziridza senge musimboti
● Kushanda sechinangwa
● Fashoni sechinangwa
Seunyanzvi hwekugadzira girazi uye zvigadzirwa zvekuwedzera, Saka Fine Plastic Technology Co, Ltd yakagadzwa kweanopfuura makore gumi nemaviri. Isu tiri muShunde, Foshan, China. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira aruminiyamu-epurasitiki girazi musuwo, ese-aruminiyamu girazi musuwo, isina girazi girazi musuwo, yakaputirwa kudziya girazi musuwo uye TLCD inoratidzira gonhi regirazi, yakadzivirirwa girazi regirazi kumawindo nemikova nezvimwewo. ese marudzi egirini epurasitiki extrusion mbiri, aluminium extrusion mbiri, yakapfava uye yakaoma co-extrusion chimiro chegirazi musuwo furemu zvinhu uye zvimwe zvekushongedza zvekuvakisa.
Magirazi edu egirazi ekuratidzira anoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana siyana dzekutengesa inotonhorera / firiji / firiji / vending zvikamu zvemuchina uye louver girazi zvinoshandiswa zvemhuri kana hofisi yekuvaka madhoo nemahwindo. Isu tine ruzivo rwekugadzira ruzivo uye yepamberi dhizaini dhizaini, takagadzirira yakakwana uye yakakura dhizaini yekugadzira uye timu yeR & D, inovhara imwechete yekumisa sevhisi kusanganisira dhizaini dhizaini, chivakwa cheWEDM mold, kugadziridza kwegungano uye mushure mekutengesa kuteedzera.
Zvigadzirwa zvekambani zvakamisikidzwa nenzira kwayo, inozivikanwa nehunyanzvi hwekugadzira uye hunyanzvi hwekugadzira. Inotarisira kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, hutano, uye basa kunzanga. Iyo yakavakirwa pane yepamusoro-mhando Eco-inoshamwaridzika zvinhu uye yakagadzirirwa neyakareruka fashoni, runako, uye hunhu. Yakasungirirwa kune zvakanakira indasitiri, zvinosangana zvizere nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi, iyo "So Fine" brand, iri kugara ichivandudza nekuvandudza, Chinangwa chedu ndechekuzivikanwa mukurumbira muCold cheni inotsigira indasitiri uye indasitiri yekushongedza imba.
Yakaomarara mhando uye yehunhu yekutarisa system, yepasi rese inotungamira tekinoroji uye hunyanzvi hwekugadzira, zvese zvakadzama zvinovavarira kukwana, zvinoramba zvichivandudza, uye zvinokanganisa zvigadzirwa zvepamusoro-soro nekuita kwakanakisa uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kusvika ikozvino, yakapa zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kune anopfuura makumi mana nyika uye matunhu epasirese, uye inozivikanwa uye inodikanwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Panguva ino, kambani yedu zvishoma nezvishoma akasuma otomatiki kugadzirwa michina. Panguva imwecheteyo, kuitira kuti ive nani kambani uye inofanirwa kusangana nezvinodiwa nevatengi nemusika, Saka Fine yakawedzerawo mutsara wekugadzira girazi remukova wegirazi, kupa vatengi mhinduro yekudya uye chinwiwa firiji uye kuratidza .
"Hunhu ndiyo hwaro", "Hupenyu kurudziro", "Kugadziridza senge"
Welcome to kuonana uye kutishanyira kuti uwane mamwe mashoko!